Nudgify: Wedzera Shotify Yako Shanduko Neiyi Yakabatanidzwa Yemagariro Proof Platform | Martech Zone
Kambani yangu, Highbridge, iri kubatsira kambani yemafashoni kuvhura yayo kunanga-kumutengi zano repamba. Nekuti ivo ikambani yechinyakare inongopa vatengesi chete, vaida mudiwa anozobatsira kuve yavo tekinoroji ruoko uye kuvabatsira neese maficha ekuvandudza kwavo brand, ecommerce, kubhadhara muripo, kushambadzira, shanduko, uye maitiro ekuzadzikisa.
Nekuti vane mashoma maSKU uye havana chiratidzo chinozivikanwa, takavasundidzira kuti vatange pachikuva chaive chakagadzirira, chinotyisa, uye chaida kudyara kushoma pane yakajairwa zvizere ... isu takasarudza Shopify.
Nekuti ivo vari kutanga iri bhizinesi kubva pakutanga, kuwana kuvimba kwevaenzi vedu kunenge kuri kutsoropodza. Pamwe nehurongwa hwehukama neruzhinji, kushambadzira otomatiki (kuburikidza Klaviyo). Taida a mumagariro uchapupu mhinduro inosanganisirwa mushe neShopify.
Chii Chinoratidza Zvemagariro?
Zvemagariro humbowo chiitiko chemagariro apo vanhu vanoteedzera zviito zvevamwe mukuyedza kuita hunhu mune yakapihwa mamiriro. Muchidimbu, vanhu vanoita zvavanoona vamwe vachiita. Iko kuchengetedzwa muhuwandu.
Robert Cialdini, Kufuridzira, Iyo Psychology yekukurudzira
Nema ecommerce saiti, ini ndaona rezvemagariro chiratidzo chebasa kupfuura vashanyi chete vachiteedzerana. Zvemagariro humbowo zvinopa dzimwe nzira dzekutyaira shanduko:
chivimbo - Kuona kuti vamwe vashanyi vari kuongorora uye kutenga chiratidzo chakasimba chekuti mucherechedzo, chigadzirwa, kana saiti inogona kuvimbwa.
Kurumidza - Pamasaiti ane mashoma ekuverenga, vashanyi vanokurudzirwa kushandura nekukurumidza pane kumirira. Kutya Kupotsa (FOMO) inzira ine simba yekutendeuka.
Popularity - Nekusimudzira zvigadzirwa zvirikutengesa zvakanyanya, mushanyi anonyatso sarudza zvichaita kuti atenge kana vakaona kuti vamwe vakazvigadzira.
Offers - Iwe unayo yekutengesa kana dhisikaundi parizvino iri kushanda? Kugadzira aya maNudges kunogona kutyaira mwero wekushandurwa kune zvakakurumbira zvaunopa iwe.
kutora - Kunyangwe kana mushanyi wako asina kugadzirira kutenga, iwe unogona zvakare kusundira vashanyi kuti vapinde-mukati kuzopa, tsamba dzetsamba, kana kunyangwe meseji.
Dzorera yakatobatsira pamusoro pewe 1,800 mawebhusaiti munyika dzinopfuura makumi masere nematatu kuwedzera huwandu hwavo hwekushandurwa - pasina chinhu asi data-rechokwadi-nguva. Zvimiro zveplatifomu yavo yakazara inosanganisira:
Recent Activity - sei kubvisa shanduko dzichangoburwa kana kusaina kwekupedzisira uye kuwedzera kuvimba
Stock Data Kudya - Ratidza real-time stock data ine otomatiki feed
Fomu Autocapture - Ratidza otomatiki kusaina-kumusoro
Nudge Matemplate - Pre-yakagadzirirwa Nudges ye e-Commerce, Kufamba, SaaS uye nezvimwe
Nudge Builder - Gadzira Nudges nyowani nemashoko ako uye mifananidzo
Ratidza Mitemo - Sarudza kuti ndeapi mapeji uye zvishandiso ako Nudges anofanirwa kuoneka
Maitiro Ekuzvibata - Gadzira chinokonzeresa, kunonoka uye kureba kweNudges yako nekugadzirisa iwo anotsvedza.
Gadzira Zvinangwa - Gadza peji rako rekusimbisa sechinangwa chekutarisa shanduko dzakabatsirwa. Shandisa akavakirwa-mukati manhamba ekugadzirisa uye uwane yakawanda kutengesa.
Tsika Styles - Chinja madingindira ako kuti umise toni chaiyo
29 Mitauro - Nudgify inotsigira zvizere mitauro 29 dzakasiyana
Dhonza & Kudonhedza Nzizi - Gadzira hova uye uratidze maNudges ako zvakarongeka
Nudge Analytics - Tora kushanya, kudyidzana, uye shanduko dzakabatsirwa kuyera kudzoka pane yako humbowo hwemagariro.
Nudgify's algorithms ari kuramba achidzidza ayo Nudge anoshandura zvakanakisa padanho rega rega rerwendo rwevatengi. Kana iwe ukareba kushandisa Nudgify, iyo inonyanya kukosha inova iyo.
Tanga Yako Yemahara Nudgify Muedzo
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Dzorera, Klaviyo, Shopify, uye Amazon uye kushandisa izvo zvinongedzo kuburikidza neichi chinyorwa.
Tags: kutya kutyafomowedzera shanduko mitengowedzera kutendeukawedzera ecommerce shanduko mitengowedzera Shopify shandukokugunzvanudgifyPsychologykutengesa popmumagariro uchapupuchii chiratidzo chemagariro